Payment Collector | Unlimited Channel Co., Ltd. ﻿
Company Unlimited Channel Co., Ltd.
Mobile Hand Set ရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းတွင် ၁၀နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံ ရှိသော အရည်အချင်းရှိဝန်ထမ်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ရန်ကုန်၊ ပဲခူး၊ တောင်ငူ၊ ပြည်၊ ပုသိမ်၊ မော်လမြိုင်၊ ဘားအံ၊ မြိတ် စသည့်မြို့ကြီးများတွင် Distribution Point များ ထားရှိကာ SAMSUNG Hand Set များဖြန့်ချိလျက်ရှိပါသည်။ကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ အချိန်တိုအတွင်း အောင်မြင်မှုထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိရန်နှင့် အောင်မြင်မှုအားရေရှည်ထိန်းထားနိုင်အောင်ကြိုးစားလျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။Unlimited Channel Co., Ltd သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ကာ SAMSUNG Mobile Hand Set များအား အောက်မြန်မာပြည်အတွက် တရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။Unlimited Channel Co., Ltd.
Looking for job in Nanhkan Apply online at www.jobless.com.mm directly to thousands employers.
Sales & Marketing Jobs(804)
Admin, Secretarial & PA jobs(699)
Engineering & Technical jobs(545)
Marketing & PR jobs(455)
HR,Training & Recruitment jobs(362)
Work in Yangon Region(4436)
Work in Yangon (Rangoon)(3720)
Payment & Asset Coordinator
Yangon Region 22 Days
Yangon (Rangoon) 42 Days
Yangon Region 43 Days
Yangon (Rangoon) 126 Days
Yangon Region 159 Days
Yangon Region 182 Days
Cards & Payment Services
Yangon Region 216 Days
Yangon Region 245 Days